गुगल म्यापमा श्रीमतीलाई अर्कैको काखमा देखेपछि पतिले गरे डिभोर्स ! – Tu Khabar Online
Home / रोचक / गुगल म्यापमा श्रीमतीलाई अर्कैको काखमा देखेपछि पतिले गरे डिभोर्स !
admin2weeks ago	रोचक Leaveacomment 436 Views
तपाईंलाई थाहा छ ? यी कुरा महिलाले पुरुषसँग सँधै लुकाउछन्
पेरु । एक जनाले आफ्नी श्रीमतीलाई अरु कसैको काखमा बसिरहेको गुगल म्यापमा देखेपछि डिभोर्स गरेका छन् । यो पेरुमा भएको घटना हो
खरिबाेट बाट साभार
Previous बनेपा काण्ड: शंकाको सुइ बुबा तिर पनि|बुबा,हजुरबुबा,जोपनि हुनसक्छ भन्दै गर्जिइन भाउजु|सम्बन्धमै प्रश्न?भिडियाे
Next कन्या, कुम्भ, तुला र मीन राशि हुनेले नछुटाइ पढ्नुहोस्
सुन्दै अचम्मकाे जागिर, अफिस गएर मस्तसँग सुत्नुहाेस् तलब पाक्छ ! पढ्नुहाेस
एजेन्सी– कतिपय मानिसलाई कार्यालयको कामसँग दिक्क लाग्छ । कतिपय मानिसहरु कामको चाप बढी भएर तनावमा …